Maxaa Keena Howlgabka Kacsiga ? Warbixin Dheer | alcarabiya.com
Home » Nolosha » Maxaa Keena Howlgabka Kacsiga ? Warbixin Dheer
Maxaa Keena Howlgabka Kacsiga ? Warbixin Dheer
Dhibaatada kacsiga, oo iyaduna loo yaqaan howlgabka kacsiga wuxuu ku yimaadaa 5 – 10% nimanka da’ 40 naadka ah.
Da’duna si kala duwan ayay ugu korortaa, sidaasi ayaa 5 ka mid ah 10kii nin ee 70 jir ahba ay la kulmaan heerar kala duwan ee cudurkan.
Cudurkan waxaa ka mid ah oo kale nimanka kacsadaa bilowga hordhaca galmada, hase yeeshee aan sii wadi karin kacsigii muddo ay ku galmoodaan.
Kacsigu wxuu ku bilowdaa isaga oo ku xiran dareen kacsi, markii ay xididada yar yarka ah ee xubinta galmada ninka ay fiddo soona galaan qulqul dhiig ah xubintaasi.
Inta badan xaaladaha cudurkan waxaa sabab u ah cudurro jireedka.
Da’du shardi uma aha iney keento cudurkan howlgabka kacsi.
Xernaanta xididada dhiiggu waxay hoos u dhigtaa inuu dhiiggu aado xubinta galmada ragga.
Cudurkan howlgabka kacsiga wuxuu caadi ahaan ku yimaadaa cuduradan dadka qaba kaadi macaanka, wadna xanuunka, dhiig karka cudurada neerfaha iyo nimanka qalliinka lagaga sameeyay dhibaato kaga timid qanjirka borostaytka.
Kiniiniga jirka biyaha ka saaraa (diuretics) iyo daawada loo qaataa dhiig karka, suuxdinta, buufiska ama buuqa (anxiolytics) waxay keeni karaan cudurka howlgabka kacsiga.
Waxaa suura gal ah inaad joojiso isticmaalka khamriga iyo inaad joojiso sigaarka oo keena hawlgab kacsi.
Wada hadalkaasi ka dib waa in dhakhtarku baaraa inaad ka sheeganeyso cudur aan lagaa daaweyn.	Daawada ugu wanaagsan ee lagu daweeyo cudurkaan baa ah maadada kooxda PDE 5-joojisa, daawooyinkaasi, ku haynaya qulqulka dhiiga xubinta galmada ragga, iyadoo la helayo kacsi ama uu joogto noqonayo.
Daawooyinkaasi wax badan kuma kala duwana dhinaca waxtarkooda, waxay shaqeynayaan muddo 4-5 saacadood ama 24 saacadood halkii diyaarin.
Aad bay muhiim u tahay in hoos laga xariiqo, in daawadu ay waxtar leedahay oo kaliya kacsiga galmada , kiniiniyayaashu ma keenaan mar walbaa kacsi.
Waa inaad daawada qaadataa ? ilaa 1 saac inta aadan u tegin xaaskaaga.
Waa caadi ineysan daawadu si xoog ah wax u qaban 6da ilaa 8da mar ee ugu horeysa, waxaa laga yaabaa iney sabab u noqoto in doosaha (Dose) aad u baahan tahay in la kordhiyo, ma isticmaali kartid daawada ugu badnaan hal mar maalintii.
Dhibaatada ay daawadu keeni kartaa waa mid iska fudud ama iska gudbeyso, waxaana ka mid ah madax xanuun , waji casaad iyo caloosha oo ku xanuunta.
Waxaa la helay daawo kale oo lagu daaweeyo cudurka howlgabka kacsiga, laakin waa ay ka waxtar yar tahay ama ay ka wanaag yar tahay isticmaalkeeda.
2 Responses to Maxaa Keena Howlgabka Kacsiga ? Warbixin Dheer	nimco Reply
April 7, 2013 at 8:38 pm	9127870
Jamac Abdulgadir Reply
March 14, 2013 at 7:24 pm	Salaamu caleekum sxb waakumahadsan tahay sida aad fikrad
Nooga tiisay waxyaabaha keena xanuunka raga qaarkood
Kudhaca.ama kacsi yaraanta .sxb adoo mahadsan daawada
Aadkorkusoo xustay.waligeed malawadayaah mise mudo
Ayaa laqaadanayaah.teeda kale gbgayga magaca daawada
Intaan usheego ma. Ii qorikaraa.halkeense daawadaas kahelikaraa.